Bluboo XTouch famerenana amin'ny teny espaniola | Androidsis
Manohy amin'ny fanadihadihana ireo marika vaovao misy ny terminal Android izahay, amin'ity tranga ity miaraka amin'ny iray amin'ireo marika izay manome firesahana bebe kokoa tato anatin'ny volana vitsivitsy, ny marika dia tsy inona fa ny Bluboo, marika niavian'ny sinoa izay manome antsika ny terminal Android misy toetra tena tsara sy manokana teknika mihoatra ny vidiny novaina.
Amin'ity tranga ity dia entinay mankany ianao Bluboo XTouch amin'ny famakafakana sy famerenana video amin'ny fiteny Espaniôla mba hahafahanao mahita ny zavatra rehetra ananan'ity mpitarika terminal mampihetsi-po amin'ny Android midadasika ity dia manome antsika antsipiriany mendrika ny elanelam-potoana avo lenta na dia amin'ny vidiny mety ho any amin'ny terminal Android farany ambany aza.
1 Bluboo XTouch famaritana ara-teknika
2 Ny tsara indrindra amin'ny Bluboo XTouch
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Bluboo XTouch
4 Fitsapana ireo fakantsary Bluboo XTouch
Bluboo XTouch famaritana ara-teknika
efijery IPS 5-inch miaraka amin'ny vahaolana FullHD sy 480 dpi
processeur Mediatek MT6753 miaraka amin'ny teknolojia 64-bit core 1'3 Ghz Octa
Tahiry anatiny 32 GB azo esorina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 64 GB farafahakeliny
Fakan-tsary aoriana Sony IMX214 16 mpx miaraka amin'ny autofocus FlasLED roa sy ny Optical Image Stabilizer
Fakan-tsary aloha 8 mpx Sony
Conectividad DualSIM 2G & 3G & 4G LTE GSM 850/900/1800 / 1900MHz - WCDMA 850/900 / 2100MHz - FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B20 - Wifi - Bluetooth 4.0 - USB OTG ´GPS sy aGPS
Fitaovana hafa Fihetsiketsehana lamba sy mpamaky ny dian-tànana
bateria 3050 mAh polymer lithium tsy azo esorina
lafiny 143 x 71 x 7'5 mm
lanja Gramin'ny 158
vidiny 161'29 euro
Ny tsara indrindra amin'ny Bluboo XTouch
Anisan'ireo fiasa na fampiasa tsara indrindra tiako asongadino momba an'io Bluboo XTouch, ankoatry ny vidiny tsy hay tohaina ary mihoatra ny fifaninanana dia tiako ny manasongadina azy famolavolana kanto sy manintona ary vita miaraka amin'ny vatany metaly matanjaka. Volavola somary tsy nitovy tamin'ny nahazatra antsika tato ho ato fa mahatalanjona ity terminal Android manaitra ity ny fahamarinana.
Etsy ankilany, ny efijery misy ny vahaolana FullHD miaraka amin'ny fahatsiarovany RAM 3 Gb, ny fahatsiarovany fitehirizana anatiny 32 Gb ary ny fikirakirany matanjaka valo nosoniavin'ny Mediatek, dia manolotra azy fampisehoana mahatalanjona amin'ny toe-javatra rehetra na amin'ny fampiasana isan'andro na ny fitifirana karazana lalao, na manao ahoana na manavesatra azy.
Etsy ankilany, ny iray amin'ireo famaritana tsara indrindra an'ny Bluboo XTouch dia hita ao aminy fahaleovan-tena goavana miaraka amin'ny batterie 3050 mAh namboarina izay manolotra aminay tokony ho adiny dimy sy sasany amin'ny fampiasana efijery amin'ny haavon'ny famirapiratany farany ambony sy amin'ny alàlan'ny fifandraisana rehetra azo atao.
Ny ratsy indrindra amin'ny Bluboo XTouch
Raha ny amin'ny ratsy indrindra azontsika asongadina amin'izany Bluboo XTouch, mieritreritra foana fa 160 euro fotsiny no ividianantsika terminal, dia afaka mahita izany isika samy fakantsary tafiditra ao anaty terminal. Ny fakan-tsary sasany izay, na dia ao anatin'ny tarehin-jiro tsara aza, dia maka sary ary mirakitra mihoatra ny horonan-tsary azo ekena, izany dia amin'ny hazavana maivana sy amin'ny atiny tsy dia misy jiro, ny tena izy dia mamela zavatra betsaka irina.
Etsy ankilany, tsara koa ny manamarika fa na dia tsara kalitao sy famolavolana tena manintona aza ny fiafarany ny efijery tenany sy ny lamosiny dia tsy voatsabo amin'ny teknolojia fanoherana ny rantsantanana Ary izany dia mampiseho fahatezerana amin'ny fampiasana isan'andro, indrindra ny lamosiny, izay ankoatry ny maloto amin'ny dian-tànana haingana dia haingana, ankoatr'izay, satria tsy voatsabo amin'ny fiarovana anti-rangotra, dia tsy maintsy tantintsika ihany koa izany. mitandrema tsara satria voaporitra izy amin'ny alàlan'ny fampidirana azy ao am-paosin'ny pataloha fotsiny.
Mora simba ny lamosina
Fakan-tsarimihetsika izay mamela be dia be amin'ny faniriana amin'ny hazavana ambany
Fitsapana ireo fakantsary Bluboo XTouch
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Bluboo XTouch, famakafakana ary famerenana amin'ny teny Espaniola
menthol dia hoy izy:
Nividy ity terminal ity aho ary manome efijery 3 ora farafaharatsiny.
Mamaly an'i menthol
Tsy azo atao ny mamaka azy io, andramo amin'ny fomba rehetra.
Ricardo Vallejo Campillos placeholder sary dia hoy izy:
Manana iray aho ary mahatsiravina izany.
Afaka manampy ve ianao, fantatrao ve ny antony mety hitrangan'izany aminy ?????
Valiny tamin'i Ricardo Vallejo Campillos
Montse dia hoy izy:
Batterie 3000? Mitovy amin'ny mpampiasa hafa ... efijery adiny 3 fotsiny!
Hisy ve ny vahaolana sa averiko ny terminal?
Valiny tamin'i Montse
Salama! Azoko ny terminal ary tsy andoavako vola izany rehefa mandeha.
Amin'ny zavatra rehetra lazainao, momba ny bateria, ny fakantsary ary ny feo…. Mihevitra ve ianao fa tsara kokoa raha naverin'izy ireo ny volako na andefasako iray hafa? ratsy ahoana izany?
chonati dia hoy izy:
Nahazo iray monja aho, ary ny marina dia misy lafy ratsy amin'ireo napetrakao tao, efa nanavao indroa aho, manantena aho fa voavaha io.
Efijery adiny 3 heveriko fa kely dia kely!
Mamaly an'i chonati
Santiago Verduga dia hoy izy:
Tsy mandeha amiko ny fakantsary, nanandrana nanongotra azy aho ary ny fakan-tsary voalohany ihany no tazako fa nivadika (ny mifanohitra amin'izay), raha misy olona afaka manampy ahy dia ho feno fankasitrahana aho ( rsantverd@hotmail.com)
Valiny tamin'i Santiago Verduga
Nanolotra afovoany tsara noho ny Bluboo Maya izy ireo. Ny marina dia tsara be ilay izy.
[APK] Google+ 6.9 dia manolotra tab iray manontolo ho an'ny fampandrenesanao